Trading Bots nokuti Cryptotrading - Blockchain News
Chivabvu 10, 2018 arun
Sei bots vanoshandira cryptotrading?
Bots dziripo dziri Software, izvo, kazhinji kacho, anoshanda zvakananga crypto-exchanges kuburikidza chirongwa inowanikwa (API). Chinangwa bots ndechokuti vapiwa mabasa kwema vane zvinhu: nokuti ichi, kuti bots kuitisa hwakadzama kuongorora musika mashoko uye, inobva Data vakawana, kusarudza pamusoro tagutsikana kwema. Zvichienderana nzira akasarudzwa, kuisa parameters uye zvinangwa, mumwe muzvinashawo anogona kusarudza chimwe Mhando ina bots:
Trading bots ongorora mashoko awanika kubva crypto-Exchange, uye kusarudza pamusoro kutenga uye kutengesa cryptocurrency inobva parameters vakasarudzwa nokuda muzvinashawo. Izvi mhando bots zvinogona customized kushanda parameters akawanda pakarepo, kana iwe unogona kushandisa predefined nzira yakagadzirwa ne vaongorori.
Arbitrage bots kuongorora kuchinja mashoko pamusoro Cryptocurrency pamusoro exchanges siyana uye vapiwa kuti kwema kuti vawane purofiti kubva mutengo musiyano.
Custom bots, kana kuti bots, anoshandiswa kugadzira kwema pamwe predefined parameters vapinda manually kana vanosarudzwa mu otomatiki muoti.
Script BotS dziripo dziri usashandisa zvinhu, pahwaro iyo muzvinashawo anogona vakazvimiririra kugadzira basa Bot. Akashandiswa vatengesi ruzivo vanoziva nezvehukorokodzwa kutengesa musi Crypto Market.
Ngozi Trading Bots musi Crypto Market
chakaremara Software: kwete zvose bots aripo akanga raparurwa nesangano chikwata Developers nyanzvi uye ruzivo crypto vatengesi. Uyezve, ari Bot, uyo Mubumbiro chikanganiso chakaitwa, murege chete kuva va neudhadha, asi anokonzerawo zvinokosha mari nezvinhu, kunyanya akabatana ane nzira havaratidzi vakasarudzwa. saka, nokuti vanotengesa zvinokosha kusarudza chete yakaonekwa kuti ndeyechokwadi bots ane yakavimbika mukurumbira uye zvakasiyana-siyana zvokushandisa.
Nguva imwe pokuwa cryptocurrency: cryptocurrencies chinhu chaizvo yainge twa, kwete insured pamusoro collapses. saka, muna June 2017, panguva GDAX Exchange, somugumisiro chikuru dhiri, mutengo mhepo zvikanyauka $ 319 kuti 10 cent. Semagumo, vatengesi vasina kuisa chichiita-kurasikirwa nemiganhu, panyaya mumasekonzi, vakatambudzika zvikuru nezvinhu. Munhau iyi, Vamwe vatengesi vane chivimbo chokuti bots vanokwanisa kushanda chete mumufananidzo ezvinhu uye ane ruzivo muzvinashawo zvichava zvakarurama kufanotaura zvinhu pamusoro musika.
kubiridzira: ari unregulated pamusika, cryptocurrency nyaya dzokubiridzira kuitika kazhinji, uye kushanda pamwe bots hakuna Kunze. In December 2017, ari Hexabo vanonyengedza Bot nokushingaira kuvhiyiwa pamusika, ichivharira mari yacho rokushandisa, Achiturika goho of crypto mari, uye ipapo akamira kushanda, anofungidzirwa nokutuma zvose mari kusvika Developers pechikuva. wo, maererano imwe muzvinashawo, unofanira kudzivisa dzakakurumbira vakasununguka bots, nekuti pamwe navo unogona nokudhanilodha software makuhwa, chinangwa chiri kuti kuwana voga wallets kiyi kana kushandisa muzvinashawo kuti raiva pedyo nebundu kuti mugodhi.
Popular Bots nokuti Cryptotrading
3nezvitura befu chinhu mukurumbira akabhadhara Bot nokuda zvoga cryptotrading, vanoshandira pamwe exchanges akadai Bittrex, Bitfinex, Binance, Bitstamp, KuCoin, Poloniex, GDAX, Cryptopia, Huobi uye YOBIT. Rinopa huru pakusarudza dzakasiyana-siyana nemigove mumabhizimisi kuti vanokwanisa kusarudza kushandisa kana kushandisa sechinhu Analytical chokushandisa kuti chamber pamusika mamiriro. Inopa nokuti mawa kushandisa chichiita-kurasikirwa mirairo uye kutora mari. Rine vana chipeto mumatunhu – “kutanga” nokuti $ 30, “Trading” nokuti $ 50, “nyanzvi” nokuti $ 100, uye zvakare “Individual” nokuti chibvumirano.
Cryptohopper ane aibhadhara Bot gore anotsanangura kuti zvinoshanda kunyange kana kombiyuta yacho muzvinashawo wacho is kana kure. vatengesi ruzivo anogona vakazvimiririra gadzirisa basa Bot, apo beginners anogona kushandisa dziripo “autopilot”. The Bot anogonawo kuongorora uye iratidzwe kubudirira kutengesa hurongwa anonongedzera akaita kare (backtest), ane Stop Loss murayiro kudzora algorithm, uye anogona kuchinjanisa zvakananga exchanges akawanda. Rine nezvemarudzi matatu pamwedzi chipeto – nokuti $ 19, $ 49 uye $ 99. A uwane kuongorora kuchikuva anogona kuwanika pano.
Cryptotrader ndiyo imwe yenzvimbo dzine mukurumbira gore cryptobots kuti kutengesa. Tinotsigira vazhinji crypto-mari uye exchanges. Anofanira zvakazara customized nokuda mushandisi. Rinopa backtesting uye zvine urongwa pamusika mabasa, izvo zvinoita kuti vanoishandisa kuti kuchinjanisa nzira. Rine nhanho mashanu pamwedzi chipeto: nokuti 0.0018 BTC, 0.0025 BTC, 0.0045 BTC, 0.0086 BTC uye 0.0214 BTC.
Haasbot ndiyo chikuva kuti zvoga zvokutengeserana, aida, kutanga kwazvose, nokuti ruzivo bitcoin-vatengesi. Anoshandisa nzira zvinobva zvemafoni kuongorora mashoko. Bot iri akaripa uye ane nhanho nhatu pagore chipeto: kuti rezinesi “mutsva” nokuti 0.073 BTC, “Simple” nokuti 0.127 BTC uye “unoratidzwa” rezinesi, iyo mari 0.208 BTC. Zvichienderana rezinesi yakatengwa, vanokwanisa kugadzira interconnected bots akawanda achakwanisa kuita nhamba dzakasiyana mabasa.
Gekko ndiyo wakasununguka rakashama tsime Bot anogona kutorwa kuna GitHub. Zviri nyore kushandisa, ane detailed danho nedanho mirayiridzo richava rinokosha kuti mano vatengesi. Ane nyore inowanikwa, anogona backtest nzira uye kuona migumisiro kutengesa. Uyezve, ari Bot Software Anomhanyira vakawanda uchishandisa hurongwa.
Zenbot ndechimwe rakavhurika tsime Bot kuti vatengesi bitcoin. The Bot vanokwanisa kukopa bumbiro uye kuti kugadziriswa kuti basa raro, uye ayo algorithm ruripo huru uchishandisa hurongwa. uye, kusafanana Gekko, Zenbot anogona kuita mukuru-kakawanda kwema uye kushandisa arbitrage mikana. zvisinei, ari crypto munharaunda zvinoita rinozivikanwa kuti Bot haina yoku- kwenguva refu, uye saka haana mukana wokushanda pamwe itsva dzakakurumbira exchanges.
Bots nokuti Cryptotrading